Muqdisho:-Ciidamada DFKM iyo kuwa AMISOM ayaa sheegay in ay qabsadeen maanta deegaanka Laanta-buuro ee gobolka Shabeellada hoose, halkaasoo saldhig weyn u ahayd Ciidamada Ururka Al-Shabaab .Dagaal kooban oo ka dhacay ka dib ayaa ciidamada AMISOM iyo kuwa DFKM waxay galeen deegaanka Laanta buuro ayuu yiri goobjooge la hadlay saxaafada Muqdisho.
Mid ka mid ah Saraakiisha DFKM oo la yiraahdo Cali Caraaye Cosoble (Gacma-duulle) ayaa sheegay inay ku dileen dagaalkaas 11-dagaalyahan oo ka tirsan Al-shabaab, wuxuuna ku faanay in ay qabsadeen Deegaanka Laanta Buuro.
Taliyaha ciidamada AMISOM Jen. Andrew Gutti ayaa isaguna sheegay in ay ciidamada DFKM iyo kuwa AMISOM ay qabsadeen deegaanka Laanta-buuro oo 40-KM u jirta magaalada Muqdisho wuxuuna sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan Ururka Al-Shabaab .
Ilaa haatan ma jiraan cid ka tirsan Al-Shabaab oo ka hadashay guulaha ay sheegteen ciidamada AMISOM iyo kuwa DFKM ee ku aadan qabsashada deegaanka Laanta-buuro oo saldhig weyn u ahayd Ururka Al-Shabaab ilaa intii laga qabsaday Degmada Afgooye ee gobalka Shabeelaha Hoose.
Dhanka kale War-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka AMISOM ayaa lagu sheegay in ay qabsadeen ciidamada DFKM iyo kuwa AMISOM deegaanka Laanta-buuro xilli magaalada Muqdisho la isku mari la,yahay ansixinta dastuurka waxaana khilaaf uu ka dhex aloosan yahay madaxada DFKM iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed.